अंग्रेजी माध्यमको पोखरीया उच्च मावि लोकप्रिय बन्दै, सरकारी मै गुणस्तरीय शिक्षा भएपछि निजी विद्यालयलाई चुनौति | Birat Khabar
अंग्रेजी माध्यमको पोखरीया उच्च मावि लोकप्रिय बन्दै, सरकारी मै गुणस्तरीय शिक्षा भएपछि निजी विद्यालयलाई चुनौति
आगामी चैत्र २९ गते हुने प्राविधिक शिक्षाको प्रवेश परिक्षाका लागि आबेदनको चाङ छ । पुर्वाञ्चलका विद्यालयहरुका लागि रोल मोडल बन्दै छौं : महेश कुमार गौतम, निमित्त प्रधानाध्यापक, पोखरीया उच्च मा.वि.
अंग्रेजी माध्यममा गुणस्तीय शिक्षा प्रदान गरेपछि लोकप्रिय बन्दै गएको विराटनगरको पोखरीया उच्च मावि सरकारी विद्यालयहरुका लागि रोल मोडल बन्दै गएको छ । निजी विद्यालयले प्रदान गर्ने शिक्षण तथा सेवा सुविधालाई न्यूनतम शुल्कमा प्रदान गरेपछि पोखरीया माविलाई पुर्वाञ्चलका अन्य सरकारी विद्यालयहरु पनि अनुसरण गर्न थालेका छन् । निजी विद्यालयलाई नै चुनौति दिदै गुणस्तरीय शिक्षामा अघि बढ्दै गएको पोखरीया उच्च मावि कस्ता कार्यक्रमहरुका साथ अघि बढ्दै छ ? यसै सन्दर्भमा विराटखवरका लागि विपी कोइरालाले गरेको कुराकानी ।
पोखरीया उच्च माध्यमिक विद्यालय कस्तो लक्ष्य सहित अघि बढेको छ ?
पोखरिया उच्च माविको मुल नारा नै “प्रतिस्पर्धाको लागि गुणस्तरीय शिक्षा, गुणस्तरीय शिक्षाको लागि पोखरीया” हो । हामीले गरेर देखाएका छौं । हिजोको दिनमा यो नारा लिएर अभियानका रुपमा अविभावकहरु माझ जाँदा कसैले विश्वास गरेनन् । स्वभाविक पनि थियो। सरकारी स्कुलप्रति वितृष्णा नै पैदा भइसकेको अवस्था थियो । तर पोखरीया स्कुलको सहयोगी टिम दृढता पुर्वक लागिरह्यो । आज हामीले हाम्रो नारालाई सार्थक तुल्याउँदै गएका छौं ।
अहिले सम्मको अवस्थामा आइपुगेर विगतलाई नियाल्दा पोखरीया उच्च माविमा कस्तो फरक देख्नुहुन्छ ?
२०६९ भदौ १५ गते सरुवा भएर यहाँ आउँदा साथीहरुको जोस, जाँगर र सहकार्यमा जुटेको देखेर टिमको उर्जालाई शिक्षणमा उतार्न हामी सहमत भयौं । प्रधानाध्यापक पनि उत्साहित हुनुहुन्थ्यो । हामी सबै निजी विद्यालयप्रति अभिभावकको आकर्षण तथा सरकारी विद्यालय प्रतिको अरुचीबारे अध्ययन गर्दै विद्यालयलाई नयाँ मोड दिने संकल्प गर्‍यौं । शैक्षिक सत्र २०६८ देखि विद्यार्थी संख्यामा देखिएको ह्रासलाई न्यून गर्ने अभियान अन्तर्गत नै हामीले अंग्रेजी भाषामा शिक्षण शुरु गर्‍र्यौ । सेवा सुविधा विस्तारमा लाग्यौं । आज धेरै निजी विद्यालयहरु हामीलाई इष्र्याको दृष्टिकोणले हेर्न बाध्य छन् ।
अहिले निजी विद्यालयलाई चुनौति दिने अवस्था छ र ?
विराटनगर ४ मा रहेको पोखरीया उच्च मावि कक्षा नर्सरी देखि १० सम्म अंग्रेजी माध्यम र कक्षा ६ देखि १२ सम्म नेपाली माध्यममा पनि कक्षा सञ्चालन गरिरहेको छ । विकास कार्यक्रम (SSDP) ले समेत सामुदायिक विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यमको शिक्षालाई महत्व दिएकाले हामी सफल भयौं । यतिमात्र नभएर राज्यबाट उच्च शिक्षा सम्मका प्राविधिक तथा अन्य विषय अध्ययनमा विभिन्न सुविधा लगायत छात्रवृत्तिको व्यवस्था समेत विद्यार्थीहरुलाई प्राथमिकता दिइरहेको छ । प्राविधिक शिक्षाको शुरुवात पछि अझ निजी विद्यालयहरु भmस्किएका छन् ।
पोखरीया उच्च माविबाट उत्पादित विद्यार्थीहरुको अवस्था कस्तो छ नि ?
पोखरीया उच्च मावि सामुदायिक विद्यालयमा अग्रस्थानमा रहेको छ । झन अंग्रेजी माध्यमको परिक्षाफल आउन थालेपछि मोरङ जिल्लाकै सामुदायिक विद्यालयमा अग्र स्थानमा उभिन सफल भएको छ । शैक्षिक सत्र २०७१ मा प्रथम पटक अंगेजी माध्यम भएपछि शुरु मै ४१ विद्यार्थीहरुमध्ये ७ जना विशिष्ट श्रेणी तथा शत प्रतिशत प्रथम श्रेणीमा उतीर्ण भए । शैक्षिक सत्र २०७२ मा ८७ विद्यार्थी मध्ये २७ जना ए प्लस, ४५ जना ए र बाँकी बि प्लस र बि ग्रेडमा उतीर्ण भए । मोरङका सामुदायिक विद्यालयहरुमा सर्वोत्कृष्ट अंक ल्याउने विद्यार्थी पनि हाम्रै विद्यालयले प्रदान गर्‍यो । अहिले विद्यार्थीहरुको संख्या १ हजार ४ सय ३२ छ । कक्षा ८ मा ३ वटा सेक्सन गरी २ सय ५१ विद्यार्थी तथा कक्षा ९ र १० मा ४ सेक्सन गरी २ सय ५३ विद्यार्थी रहेका छन् । नयाँ सेक्सन बाट संख्या अझ बढ्ने निश्चित छ । हामीले अभिभावकहरुको मन जितिसकेका छौं ।
आगामी शैक्षिक सत्रमा अरु केही नयाँ कार्यक्रम छन् कि पुरानैले निरन्तरता पाउँछ ?
कम्प्युटर इन्जिनियरीङमा विद्यार्थीहरुको आकर्षण बढेकाले हामीले यसको लागि ५० कम्प्युटर थप गर्दै छौ । आगामी चैत्र २९ गते हुने प्राविधिक शिक्षाको प्रवेश परिक्षाका लागि आबेदनको चाङ छ । नियमित दर्जनौंको संख्यामा अभिभावकहरु आइरहनुभएको छ । हामी प्रयोगात्मक पक्षलाई जोड दिइरहेका छौं । विज्ञान प्रयोगशाला भएका आधुनिक उपकरणहरु पनि विद्यार्थीहरुका लागि आकर्षण बनेका छन् । हामी अझ नया शैलि र कार्यक्रमका साथ अघि बढ्छौं ।
पोखरीया उच्च माविलाई कुन स्तर सम्म अघि बढाउने लक्ष्य छ ?
हाम्रो मुल लक्ष्य हो आफु देशमै रोल मोडल बनेर सामुदायिक विद्यालयहरु प्रति आम जनतामा सकरात्मक दृष्टि प्रदान गर्नु हो । हामी आफु मात्र नभएर सबै सामुदायिक विद्यालयहरु निजी विद्यालयको स्तरमा खडा भएको हेर्न चाहन्छौं । त्यसैको लागि हामी आफु तिब्र गतिमा अघि बढ्न चाहन्छौं । निजी विद्यालय प्रति अभिभावकहरुको जुन आकर्षण छ त्यो हाम्रै कमजोरीले हो । अब सामुदायिक विद्यालयहरु उदाहरणीय बनेर देखाउने बेला आएको छ । अहिलेकै अवस्थामा निजी विद्यालयहरुलाई पोखरीयाको गुणस्तर चुनौतिपुर्ण बन्दै गएको छ । विद्यार्थीहरु र अभिभावकहरुको पनि सकरात्म दृष्टिकोण भए व्यवसायिक बन्दै गएका निजी विद्यालय प्रतिको आकर्षण कम हुदै जानेछ ।